कांग्रेस महाधिवेशनमा बौद्धिक समुदायको आकर्षण ! « Nepal Bahas
तीन दर्जन पत्रकारहरु महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार
प्रकाशित मिति : ६ आश्विन २०७८, बुधबार ०७:५२
३ असोज, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस चौधौं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको छ । देशभर संगठन सुदृढीकरण अभियान, वडादेखि जिल्ला तहसम्मका अधिवेशनहरु भैरहेका छन् । १३ जिल्लाबाहेक अन्यमा अहिले वडा अधिवेशन सिध्याएर गाउँपालिका र नगर, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशनकाे तयारी केन्द्रीत हुन थालेकाे छ।
अब असाेज १५ गते महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट कार्य हुँदैछ । राजनीतिक नेता कार्यकर्ताका लागि ‘एक प्रकारको उत्सव’ भएकाले कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया निकै पेचिलो बन्दै छ । यही पेचिलो अवस्थामा कांग्रेसको सैद्धान्तिक, वैचारिक मूल्य र मान्यतालाई आत्मसाथ गर्ने बौद्धिक जगतको पनि पार्टी राजनीतिमा आकर्षण बढेको छ । पेशागत संगठनहरुमा रहेर कांग्रेसलाई सहयोग गर्दै आएका बौद्धिक जगत आफै महाधिवेन प्रतिनिधि हुन अग्रसर भएका छन् ।
अबको कांग्रेस कस्तो बनाउने र त्यसका लागि कस्तो नेतृत्व छनौट गर्नुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस कार्यकर्ताहरुले सोच्ने समय आएकै कारण महाधिवेशन प्रतिनिधिदेखि क्षेत्रीय तथा गाउँ, नगर र जिल्लामा समेत युवा नेताहरुको सहभागीता बढ्न थालेको छ । जिल्लाबाट छनौट भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले नै भावी केन्द्रिय नेतृत्व चयन गर्नेछन् । त्यतिमात्र होइन विभिन्न पेशा र संस्थामा सहभागी रहेका नेता कार्यकर्ताहरुले पनि यसपटक कांग्रेस नेतृत्व चयनमा सहभागी हुने र अबको कांग्रेस बलियो कांग्रेस बनाउने अभियानमा लागेका छन् ।
कांग्रेसभित्र विचार, नीति र सिद्धान्तमा बहस हुन छाडेकाले पार्टी गतिहिन र दिशाबिहीन अवस्थामा पुगेको र स्वार्थहरुको झुण्डले पार्टीमा व्यक्ति पूजा हावी भएको आरोप लागिरहेको छ । यही आरोपलाई चिर्न बौद्धिक वर्ग महाधिवेशनमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन चाहेको छ । उनीहरुले कम्युनिष्ट आन्दोलनको क्रममा सहभागी भएका पत्रकारहरु राज्यको नीति निर्माण तहमा पुगेको उदाहरण दिदै कांग्रेसले सैद्धान्तिक बहस र चुस्तदुरुस्त नेतृत्व बनाउनका लागि बौद्धिक वर्गको सहभागिता रहनुपर्ने आवाज मुखरित गर्न थालेका हुन् ।
लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कतिपय युवा नेताहरुले केन्द्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि, प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि र नगर तथा जिल्लाको नेतृत्वमा दावी गरिहेका मात्रै छैनन उनीहरुले कांग्रेसलाई आइपर्ने चुनौती पराजित गर्ने लक्ष्य र उदेश्यले अघि बढेका छन् । विगतमा पत्रकारिता क्षेत्रबाट कांगेस नेतृत्वमा पुगेका संस्थापक नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आर्दश मान्दै उनीहरुले नेपाली कांग्रेसको शुद्धिकरण र सुदृढिकरण अभियानमा सहभागी हुने आशा लाग्दो धारणा राखेर अघि बढेका छन् ।
कांग्रेसमा भट्टराई बाहेक होमनाथ दाहाल, पुरुषोत्तम बस्नेत जस्ता पत्रकारहरूका पाका नेताहरुले नेतृत्वमा पुग्ने अवसर पाएको भएपनि उनीहरु विस्तारै बाहिरिएपछि पत्रकारिता गरिरहेका युवा पुस्ताको आकर्षण बढेको हो । विगतमा एमालेबाट रघु पन्त, गोकुल बाँस्कोटा दुवै मन्त्री मात्र भएनन उनीहरु स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहेर काम गरिरहेका छन् । एमाले र माओवादीका धेरै पत्रकारहरु पार्टीको केन्द्रीय तहमा रहेका छन् । तर कांग्रेसमा यो संख्या हुँदै नभएकाले पनि पत्रकार युवाहरु यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् ।
यतिबेला उनीहरुले खुलेरै आफ्ना धारणा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका छन् । कांगेस कार्यकर्ता र मतदातासँग जोडिने र विचार प्रवाहलाई अगाडी बढाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदा उनीहरुले कांग्रेसभित्रको धनवाद, डनवाद र आर्शीवादलाई चुनौति दिइरहेको कांग्रेसजनले महशुस गरिरहेका छन् । पत्रकारिता पेशालाई आधार बनाएर महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि होमिएका युवा नेताहरुको धारणालाई कांग्रेसको मुल नेतृत्वदेखि तल्लो तहका कार्यकर्ताले समेत चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।
कांग्रेसभित्र हुन गइरहेको आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामा मिडिया हाउसका सञ्चालक तथा क्रियाशील पत्रकारहरु महाधिवेशन प्रतिनिधिको दौडमा छन् । कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ र यसको नेतृत्वमा पुग्ने चरित्र र स्वाभाव कस्तो लिनुपर्छ । राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय रुपमा कांग्रेसको छविलाई कसरी अघि बढाउनुपर्छ, मुलुकको विकासमा कांग्रेसको समग्र धारणा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा उनीहरु निकै सजग रहेका छन् । अहिलेको नेतृत्वप्रति प्रश्न उठाइरहँदा कांग्रेसका पुरानाले नेताले सहजै छोड्लान ? यो गहन र गम्भीर प्रश्न पनि उनीहरु सामु चुनौति बनेर आएको छ ।
कांग्रेसको राजनीतिक नेतृत्वको आकांक्षा पाल्नेले जनताको बीचमा आइपर्ने ‘चुनौती’ सामाना गर्ने हिम्मत हुनुपर्छ । यो चुनौतीलाई पत्रकारले उठाएको देखिन्छ । के यो कांग्रेस नेतृत्वमा उठेको ‘शान्त क्रान्ति’ सँग देशको समग्र आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको खाका छ ? के पत्रकार जमातले नयाँ कांग्रेस निर्माण गर्न सक्लान् त ? वा भावी नेतृत्वमा सक्षम र दुरदर्शी नेतृत्व ल्याउन सहयोग गर्लान ? वा उनीहरुले कांग्रेसलाई भावी पुस्ताको आशालाग्दो पार्टी बनाउने नीति ल्याउन सहयोग गर्लान ? यस्ता अनेकन् चुनौती छन् ।
त्यतिमात्र होइन आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसलाई साच्चिकै पहिलो पार्टीको रुपमा स्थापित गरेर मुलुकको विकास निर्माणको नेतृत्वमा पुर्याउने छ त ? अरुलाई गाली गरेर भन्दा पनि आफूलाई अब्बल बनाउने पत्रकारिता पेशामा लागेका युवा नेताहरुले अघिल्लो पुस्तासँग कसरी प्रस्तुत हुन्छन् ? यस्ता धेरै प्रश्नहरुले घेरिएका बेला चुनौतीको सामान गर्न तयार भएर अघि बढेका छन् । अघिल्लो पुस्ता आफ्नो कमी–कमजोरी कहिल्यै आत्मसमीक्षा गर्न रुचाउँदैनन्, थाकेका र ऊर्जाविहीन भएपनि नेतृत्वमा बसिरहने भएकाले अघिल्लो पुस्तालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै रहेको छ ।
कांग्रेसमा नेतृत्व क्रान्तिको वेगबाट आउँछ कि परम्परावादी ढंगबाट ? यसको फैसला कांग्रेसका झण्डै पाँचहजार प्रतिनिधिहरूले महाधिवेशनमार्फत गर्नेछन् । यस प्रक्रियामा नेपाल प्रेस यूनियनमा काम गरिरहेका नेताहरु पनि आफूलाई अब्बल सावित गर्दै निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन खोजिरहेका छन् । नेपालबहस डटकमका प्रधानसम्पादक तथा वरिष्ठ पत्रकार इन्द्र रिजाल, यस्तै नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनमा महाधिवेशन प्रतिनिधीमा उम्मेदारी दिने घोषणा गरेका छन् । वाग्लेले तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधीमा उम्मेदारी दिने घोषणा गरेका छन् । हाम्रा कुरा डटकमका प्रधानसम्पादक अजयबाबु शिवाकोटी दुवैले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उम्मेदवारी घोषणा गरेर कार्यक्षेत्रमा खटिएका छन् ।
यस्तै नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले नेपाली कांग्रेसको निर्वाचनमा महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उम्मेदारी दिने घोषणा गरेका छन् । वाग्लेले तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उम्मेदारी दिने घोषणा गरेका छन् ।
त्यस्तै पोखरामा नगरसभापतिका लागि गंगाधर पराजुली, इलाम नगरपालिकामा सोम सुसेली र विमला भण्डारीले महिला प्रतिनिधिको उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् । उनीहरु सबै जना पत्रकार हुन् । प्रेस यूनियनका कोषाध्यक्ष सरोज अधिकारी धादिंङबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि भइसकेका छन् । गोरखापत्रका निवर्तमान प्रबन्ध सम्पादक गोकर्ण अर्याल धादिङबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि भैसकेका छन् ।
अर्का पत्रकार माधव चौलागाई पनि यही दौडमा अघि बढी रहेका छन् । यसरी कांग्रेसको नेतृत्व चयनमा युवा पुस्ताको आकर्षण बढ्न थालेको छ । युवा पुस्तासँगै बौद्धिक जगतले पनि आफ्नो उम्मेदवारीलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन् । देशभर प्रेस यूनियनमा आवद्ध रहेका करिव ३५ जनाले कांग्रेसको भावी नेतृत्व कस्तो हुने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन् ।
सैद्धान्तिक बहस प्रारम्भ भयोः रिजाल
कांग्रेस समयको गतिसँगै अघि बढ्ने गतिशील पार्टी हो । यो पार्टीको इतिहासमा धेरै उत्तारचढाव आयो । इमानदार नेता कार्यकर्ता पन्छिने र पार्टीलाई औद्योगिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरुले कब्जा लिने अवस्था आउन थाल्यो । पार्टीले उद्योगीहरुको लागि सहज नीति बनाउने हो तर पार्टीभित्र हुलेर पार्टी जिम्मा लगाउने होइन भन्ने धारणा वरिष्ठ पत्रकार इन्द्र रिजालको छ । अहिले पार्टी भुत्ते हुनुमा पार्टीभित्रको सैद्धान्तिक बहस कमजोर हुनु पनि हो भन्ने उनको धारणा छ । उद्योगीलाई उपयुक्त नीति बनाउनुको साटो पार्टीमा ल्याएर नेता कार्यकर्तालाई दास बनाउने हो भने जनस्तरको संगठन कमजोर हुने उनको धारणा छ ।
‘जनस्तरमा संगठन बनाउने इमानदार कार्यकर्ताले व्यापारीहरुको झोला बोकेर उनकै लागि मत मागिदिनु पर्ने परिस्थिति आउन थाल्यो हामी यो अवस्था आउन दिन्नौ’, रिजाल भन्छन् । उनले कांग्रेसभित्र सैद्धान्तिक र वैचारिक बहस कमजोर बन्दै गएपछि चाकडी चाप्लुसी प्रथा बढेको बताए । ‘यसले नवधनाढ्यहरुले राज्य सत्ता कब्जा गर्ने खतरा बढाउदैछ, जब नव धनाढ्यले पार्टी कब्जा गर्छन राज्य सत्ता पनि उनीहरुकै हातमा जान्छ’, उनले भने ‘कांग्रेसलाई अब कुन दिशामा लाने कुन बाटोमा लाने यसको भावी नेतृत्व कस्तो हुने र विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउदै सैद्धान्तिक, राजनीतिक रुपमा अब्बल बनाउने दायित्व कांग्रेस कार्यकर्तामा आएको छ यो बहस म र म जस्ता अन्य साथीहरुको उम्मेदवारीले पनि प्रारम्भ गरेकाे छ । यसबाट कांग्रेसको संगठन सुदृढ हुने शद्धिकरण हुने आस देखिएको छ’, नेपालबहस डटकमसँग रिजालले भने ।
कांग्रेसको महाधिवेशनमा अहिले मिडिया सञ्चालक तथा पत्रकार, विभिन्न पेशाबाट आएका बौद्धिक वर्गको सहभागिताले अबको कांग्रेस कस्तो बनाउने भन्ने नितिगत निर्णय हुनेछ । पार्टीको रुपान्तरका लागि, नीतिको बारेमा बहसका लागी, पार्टीको भविष्य कता जाने, नयाँ पुस्तालाई कसरी परिचालन गर्ने, पार्टीमा व्यक्ति हावी भएका कारण, पार्टीमा धनवाद हावी भएका कारण पार्टीलाई जीवन्त बनाउन र पुर्नजीवन दिन महाधिवेशन प्रतिनिधिमा उम्मेदवारी दिएको रिजालको दावी छ ।
‘विगतमा के थियो भन्नेतिर जाँदैनौ, विगतको राम्रो पक्षलाई आत्मसाथ गर्दै नराम्रो पक्षबाट पाठ सिक्छौ र अघि बढ्छौ, अघिल्लो पुस्ताको सम्मान र नयाँ पुस्ताको आगमन एउटा स्वाभाविक प्रकृया हो यही प्रक्रियामा म छिरेको हुँ । खासगरी अब आउने नेतृत्वले भावी कांग्रेसको स्वरुप निर्धारण गर्नेछ त्यसर्थ युवाहरु अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ, रिजालले भने‘ अहिलेको पुस्ता नै भावी कांग्रेसको हकदार हो, यसबाट पछि हट्ने कुरा छैन, हामीपछि नयाँ पुस्ताले सिद्धान्तमा स्पष्ट भएको विचारमा बलियो भएको कांग्रेस पाओस ।’
स्याङजामा जन्मेका रिजाल लामो समयदेखि कांग्रेसका विभिन्न तह र तप्कामा बसेर काम गर्दै आएका छन् । यसअघि आफ्ना अघि आएका विभिन्न अवसरलाई उनले केन्द्रमा राखेनन् । जिल्ला र केन्द्रमा पनि आफूलाई प्राथमिकतामा नराखी संगठनलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए ।
नेपालकै लोकप्रिय अनलाइन सञ्चारमाध्यम नेपालबहस डटकमका प्रधानसम्पादक समेत रहेका रिजाल पञ्चायतको बर्बर दमनविरुद्ध सतिसाल जस्तै उभिएका थिए । विगतमा लोकतन्त्र माथिको ठाडो हस्तक्षेपका बिरुद्धमा किशोर अवस्थादेखि नै पर्खाल बनेर उभिएका रिजाल स्याङ्जा कांग्रेसको एउटा इतिहास हुन । पञ्चायतकालदेखि नै नेपाल बिद्यार्थी संघमा आवद्ध भएर राजनीतिक र वाक स्वतन्त्रताका पक्षमा आवाज बुलन्द पार्ने कांग्रेस नेता रिजालले अहिले पत्रकारिता, लेखन र राजनीतिलाई एकैसाथ अगाडि बढाईरहेका छन् ।
शंकरदेव क्याम्पसबाट व्यवस्थापन शिक्षामा स्नातकोत्तर गरेका रिजाल स्याङ्जा पत्रकार समाज नेपालका संस्थापक र वर्तमान अध्यक्ष समेत हुन् । यूवा नेता रिजाल अहिले सम्पन्न हुन गैरहेको नेपाली कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशनमा स्याङ्जा क्षेत्र नं. १ बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । उनले पार्टी राजनीति अघि बढाउदा पनि आफू पत्रकारिताको कुन न कुनै माध्यमबाट अघि बढिरहने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।
पार्टीप्रति युवा पुस्ताको आकर्षण बढायोः सिवाकोटी
कांग्रेस पार्टीप्रति युवा आकर्षण बढेपछि नयाँ ऊर्जा पनि थपिएको छ । यसले भविष्यमा कांग्रेसको नाममा राजनीति गर्न चाहने पुस्ताका लागि मैदान फराकिलो हुने विश्वास व्यक्त गर्छन नेपाल प्रेस युनियनका केन्द्रीय महासचिव एवं चर्चित पत्रकार अजयबाबु शिवाकोटी । उनले नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनमा दोलखाबाट खुल्ला तर्फ केन्द्रीय प्रतिनिधिमा उम्मेदारीको घोषणा गरेका छन् । नेपालबहस डटकमसँगको कुराकानीमा सिवाकोटी भन्छन्– ‘कांग्रेस पार्टी लामो समय काम गर्दा युवा, भावना, जोस, जागर समेट्दै परिपक्क समय अनुकुल, समय सापेक्ष लोकतान्त्रिक पार्टीलाई जीवन्त राख्न सिद्धान्तको पूर्नव्याख्या र संगठनको पुनर्निर्माण जरुरी छ त्यसकारण अब हामी जस्ता युवाहरुले नेतृत्वमा दावी गर्नुपर्छ ।’
कांग्रेसमा युवाले आर्जन गरेको शिक्षा, ज्ञान, श्रम र सीप स्वदेशमा उपयोग गर्न कस्तो नीति बनाउने र युवालाई स्वदेशमै खुसी हुने बनाउन कस्तो कार्यक्रम ल्याउने भन्नेबारे मात्र स्पष्ट हुन सकियो भने भावी पुस्तालाई कांग्रेसका नाममा राजनीति गर्ने मैदान फराकिलो हुँदै जाने सिवाकोटीको धारणा छ ।
चौधौँ महाधिवेशन यसपटक दोलखाको भूगोलबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि आफूलाई उभ्याएको सिवाकोटीले बताए । ‘अबको महाधिवेशनले कांग्रेस अब्बल हुनका लागी सहि, नीति र निर्णय समय अनुकुल लिन सक्नु पर्छ । ‘युवा पुस्ताको आर्कषणले कांग्रेसलाई जीवन्त राख्न नीतिगत निर्णय र पाको उमेरसँगै युवाको सहभागीताले आम नागरिकका सपना पक्कै पुरा हुनेछ’, उनले भने वैचारिक रुपमा स्वलखन हुन लागेको कांग्रेसलाई जोगाउने सैद्धान्तिक बहसको केन्द्र बनाउने काम पनि युवा पुस्ताकै हो ।’
२५ बर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय सिवाकोटी पार्टीको विचार र आस्थालाई अलग राखेर पत्रकारिता गर्दा भएका गरेका सिकाई, अनुभव र ज्ञान अनि हौसला र प्रेरणाले आफूलाई महाधिवेशन प्रतिनिधीका रूपमा उभ्याएका छन् । ‘व्यक्तिगत उद्धेश्य प्राप्तिको लागि निरन्तर मेहनत चाहिन्छ । एउटा व्यक्ति योग्य डाक्टर, वकिल, गुरु, व्यापारी, कलाकर्मी, पत्रकार, खेलाडी आदि बन्न पनि अनुशासित लगाव चाहिन्छ । व्यक्तिको व्यक्तिगत व्यक्तित्व निर्माणको निर्णय व्यक्ति स्वयंमा निर्धारित हुन्छ । राजनीति सामूहिक यात्रा भएकोले राजनीतिक सफलताको लागि अनुशासन र निर्णय प्रकृयामा सामूहिक सहभागीता अनिवार्य रुपमा चाहिन्छ’, सिवाकोटीले भने । पार्टीमा लागिरहँदा पनि पत्रकारितामा कुनै लेख तथा रचना लगायत कुनै विचार मार्फत कुनै तह र तप्पकाबाट जोडिने पनि उनले बताए ।